Fred oo fariintiisa ugu horeesay u diray jamaahiirta kooxdiisa cusub ee Manchester United – Gool FM
(Manchester) 05 Juunyo 2018. Xidiga khadka dhexe xulka qaranka Brazil ahna saxiixa cusub ee kooxda Manchester United Fred ayaa wuxuu fariin u maray bartiisa rasmiga ah ee Instagram-ka jamaahiirta Red Devils.
25 jirkaan ayaa 156 kulan u saftay Shakhtar waxaana uu kula guuleystay labo horyaal ee isku xigta oo uu la qaaday kooxda ka dhisan dalka Ukraine.
Xidiga xulka qaranka Brail ayaa ka gudbay baaritaanka caafimaad kahor inta uusan u saxiixiin Manchester United heshiis cusub, si uu qeyb kaga wiilasha uu hogaaminayo Jose Mourinho laga bilaawo kulamada is diyaarinta ee u dhaxeeya labada xili ciyaareed.
Fred ayaa kusoo qoray bar-tiisa Instagram-ka: “Waxaan ku fanaayaa inaan ka mid noqday kooxda casaanka ah # Fred-casaan#
Si kastaba Manchester United ayaa war rasmi ah ay kasoo saaray saxiixa Fred waxay ku sheegtay: “Manchester United ayaa ku faraxsan inay ku dhawaaqdo in ay heshiis kala gaarto Shakhtar saxiixa Fred”.
Fred ayaa xusid mudan inuu noqday saxiixa ugu horeeya ay kooxda Manchester United ka sameesay suuqan xagaaga.